कस्तो फोटो मान्य हुन्छ डिभी लटरीमा ? :: Press Chautari ::
शनिवार, चैत्र २२ गते, २०७६
कस्तो फोटो मान्य हुन्छ डिभी लटरीमा ?
२०१५ को डिभी लटरीको लागि आवेदन खुला भयो । अमेरिका पुग्दा मात्रै पनि नेपालीहरुको स्तरमा कायापलट हुन्छ भन्ने सोच अझै पनि हावी छ, जतिसुकै अमेरिकामा पनि नेपालीले पाएका दुखका समाचार बाहिर किन नआउँन्, सबैलाई डिभी भर्नु छ । आफैले घरैबाट डिभी भर्न सकिन्छ भन्ने धेरैलाई जानकारी त छ तर पनि केहि प्राबिधिक समस्याहरु परिरहन्छन् । सामान्यतया धेरैको समस्या उस्तै छन्, फर्म त सजिलै रहेछ भरिएला तर फोटो भ्यालिड भएको नभएको कसरी हेर्ने ? हुन त यसबारे पनि सबै सूचना डिभी भर्ने साइटमै स्पष्टै लेखिदिएको हुन्छ तर समस्या अंग्रेजी भाषाको हो । यसैले फोटो भ्यालिड भएको नभएको कसरी जाँच गर्ने ? र कस्तो फोटो भ्यालिड हुन्छ ? भन्ने जानकारीका लागि अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट ले दिएको जानकारीको साराशं नेपालीमा राखेको छु ।
तपाईले डिजिटल क्यामेराबाट खिचेको डिजिटल फोटो सिधै अथवा आफ्नो फोटो स्क्यानरबाट स्क्यान गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ । कस्तो फोटो भ्यालिड हुन्छ त ?
मुख्य कुरा, डिभी लटरीका लागि प्रयोग गरिएको फोटो ६ महिनाभन्दा पुरानो हुनुहुँदैन । फोटोमा कुनै एकमात्र खराबी देखिएको छ भने पुरै आवेदन नै रद्द हुन्छ ।
कस्तो फोटो चाहिन्छ ? कस्तो फोटो रद्द हुन्छ ?
- फोटोमा पुरा अनुहार, घाँटी र काँध देखिएको हुनु पर्छ । फोटो ६००x६०० पिक्सेलको हुनु पर्छ ।
- फोटोमा आवेदक झुकेको नभई ठाडो भएको हुनुपर्छ । अनुहारमा वा पृष्ठभुमीमा छाँया परेको हुनु हुदैन ।
- फोटोमा व्यक्तिले सिधा क्यामेरा तिर हेरेको हुनुपर्छ । अनुहारमा कुनै विशेष दाग वा कोठी छन् भने ति देखिएको हुनुपर्छ ।
- मुस्कुराएको फोटो रद्द हुन्छ ।
- फोटोसप वा कुनै पनि इमेज एडिटिङ टुल प्रयोग गरी तन्काएको, दाग हटाएको, रङ् परिवर्तन गरेको, तन्काएको वा खुम्च्याएको तस्विरहरु आवेदनका लागि योग्य हुदैनन् ।
- तस्विरमा पृष्ठभुमि एकै रङ्को उज्यालो हुनु पर्छ । अरु कुनै आकृति देखिएको वा छाँया परेको तस्विर मान्य हुदैन ।
- तस्विरमा टाउको सिधा अगाडी हेरिएको हुनुपर्छ । देब्रे वा दाहिने वा तल वा माथि तिर हेरेको फोटो रद्द हुन्छ ।
- फोटोमा टाउकोको माथिल्लो भागदेखि चिउँडोसम्मको भागले फोटोको ५० देखि ६९ प्रतिशत भाग ओगटेको हुनु पर्छ जसमा आँखा फोटोको ५६ देखि ६९ प्रतिशत माथि होस् ।
- अनुहार ढाक्ने वा छाँया पर्ने गरि चस्मा लगाएर खिचेका तस्विरहरु मान्य हुदैनन् । टाउकामा चस्मा राखेको वा घाँटीमा झुन्ड्याएको तस्विर रद्द हुन्छ ।
- टाउकोमा लगाइएको टोपी धार्मिक महत्वको हो भने मात्र मान्य हुनेछ । अन्य सम्प्रदायिक वा सैनिक वा अरु कुनै पनि किसिमका टोपीहरु लगाएको फोटो मान्य हुदैन ।
फोटो ठिक भएको नभएको त्यही भएको सफ्टवेयरले जाँच गरिहाल्छ नि ।
साइटमा भएको सफ्टवेयरले तोकिएको आकार भएको जुनसुकै फोटो जाँच गर्दा पनि मान्य हुने नै देखाउँछ । डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले राखेको फोटो मान्य हुने/नहुने जाँच गर्ने सफ्टवेयरले फोटोको पिक्सेल ६००x६०० भए नभएको मात्र हेर्छ । अरु कुनै किसिमका त्रुटीहरु यसले हेर्दैन । अन्य त्रुटीका बारेमा आफै जानकार हुनु पर्छ ।
१२ कक्षा पास गरेकाले मात्रै हो डिभी भर्ने ?
होइन, डिभी भर्नका लागि १२ कक्षा पास भएको हुनुपर्छ । वा, आधिकारिक निकायहरुबाट कम्तिमा २ बर्ष तालिम लिएर गर्न पाइने काम कम्तिमा २ बर्ष गरेको भएपनि हुनेछ ।
शनिवार, २०७० आश्विन १९ गते १७:४४ / Saturday, Oct 05, 2013 5:44 pm
अरु समाचारहरु :: इतिहास
1. कम्पनी मोहर
2. ६२ जिल्लामा टेलिकमको इभिडिओ
3. ग्राहक तान्न ब्रान्डेड कार कम्पनीका बिशेष उपहार
4. स्वस्थ मासु र रमाइलो दसैं
5. विजयादशमिको पहिलो दिन घटस्थापना
6. कस्तो फोटो मान्य हुन्छ डिभी लटरीमा ?
7. नर्बेमा मध्यरातमा घाम ?
8. विदेशमा ज्यान गुमाउनेको डरलाग्दो तथ्याङ्क
9. इन्टरनेटबाट मितेरी साइनो
10. वाह् सेक्स टोय
11. अञ्जूको वियोगान्त कथा
12. कतारमा मल अफ एसिया